Donald Trump nanao sonia ny didim-pitsarana mitaky ny fanagadrana ireo mpanao fihetsiketsehana mikendry tsangambato - teles relay
Donald Trump nanao sonia ny didim-pitsarana mitaky ny fanagadrana ireo mpanao fihetsiketsehana mikendry tsangambato
By bryanekobe On Jona 28, 2020
Donald Trump nanao sonia decret miantso ny fanagadrana ireo mpanao fihetsiketsehana izay mikendry tsangambato
Nanao sonia didim-panjakana miantso ny fanagadrana ireo mpanao fihetsiketsehana mikendry tsangambato ny filoha Donald Trump.
Ny fepetra dia mamaritra fa izay olona manimba ny sarivongam-bahoaka dia tsy maintsy henjehina "araka ny lalàna ankatoavin'ny lalàna".
Ny baikon'i Trump dia mitaky ny fitazonana ny vola federaly amin'ny fizaram-pahefana eo an-toerana sy ny departemantan'ny polisy izay tsy mahavita manakana ny "fitsipika mafia".
Sarivongana amerikanina no voatifitra taorian'ny famonoana nataon'ny polisy ny lehilahy mainty iray tsy an'asa, George Floyd.
Namoaka ny baiko ny filoham-pirenena zoma alina taorian'ny nanafoanana tampoka ny fitsangatsanganana iray nokasaina ho any amin'ny làlany golf tao Bedminster, New Jersey, nanoratra tao amin'ny Twitter fa hijanona ao Washington DC izy "hametraka antoka fa NY LALANA ARY NY FANDROSOANA dia. ampiharina ”.
Ny fepetra dia nilaza hoe: "Betsaka ny mpanakorontana, arsonisista ary mpanafika mahery fihetsika izay nanohana sy nanohana ireo fihetsika ireo no nanambara mazava ny tenany tamin'ny ideolojia - toa an'i Marxism - izay mitaky ny handravana ny rafitry ny governemanta amerikana. "
Ampangainy ireo mpanao fihetsiketsehana noho ny "tsy fahalalana lalina ny tantarantsika".
Ny baiko dia mitanisa ny zava-kendrena farany teo amin'ny fonjan'i San Francisco tamin'i Ulysses S Grant, izay nanana andevo talohan'ny naha mpitari-tafika ny tafika Union ary nandresy ny confederation an'ny andevo nandritra ny Ady Sivily, a sarivongana tany Madison, Wisconsin, mpifindra monina iray nanala ny fanafoanana ny Union, ary fahatsiarovana an'i Boston iray izay fahatsiarovana ny fihetsiky ny Amerikanina Amerikanina izay niady tamin'iny ady iny ihany.
Legendan'ny mediaIsa efatra izay manazava ny fiantraikan'i George Floyd
"Ny tsirairay sy ny fikambanana dia manan-jo hitalahoana am-pilaminana amin'ny fanesorana na fananganana tsangambato rehetra", hoy ny didim-panjakana.
“Saingy tsy misy olona na vondrona manana zo hanimba, hanimba na manala tsangambato amin'ny alàlan'ny hery. "
Notanisainy ny lalàna misy fa misy hatramin'ny 10 taona an-tranomaizina ho an'izay manimba fananana federaly.
Mampitandrina ny fanapahana eo an-toerana ny ôrdônansy fa ny tsy fahombiazana miaro ny tsangambato toy izany dia mety hahita ny volany federaly mifatotra amin'ny sehatra ho an'ny daholobe.
Ny departemanta pôlisy izay tsy niaro ny sarivongana tamin'ny fahasimbana na ny valan-dratsy koa dia mety ho very ireo vola ireo, hoy ny fampitandremana.
Voalaza koa fa na iza na iza "manimba, manova na manimba fananana ara-pivavahana dia ao ny manafika, manala na manala baraka an'i Jesôsy na olo-mpivavaka hafa na asehon'ny artista ara-pivavahana" dia tokony henjehina mandritra ny fatra eken'ny lalàna.
Ilay fepetra dia toa hita amin'ny lahatsoratra Twitter vao haingana avy amin'ny mpikatroka mafàna fo ara-tsosialy malaza Shaun King izay nanoratra fa "ny sarivongan'ireo Eropeana fotsy izay lazainy fa i Jesosy dia tokony hidina."
Nanampy ilay sioka hoe: "endrika izy ireo ny fahefana ambony fotsy. "
Copyright copyrightFIFANEKENA FIFANEKENA
legendSarivongan'i Christopher Columbus no noravan'ny mpanao fihetsiketsehana tao St Paul, Minnesota
Ny tsangambato momba ny fanamafisana dia lasibatra manokana tany Etazonia tao anatin'ny fihetsiketsehana nasionaly nateraky ny fahafatesan'i Floyd tany Minneapolis, Minnesota, iray volana lasa izay.
Niaro ny marika Confederate ny filoha Trump ho ampahany amin'ny lova Amerikana.
Ny sarivongan'i Christopher Columbus, mpikaroka amin'ny taonjato faha-XNUMX izay manao dia an-tsambo ho an'i Espana, no namonjy ny fanjanahan-tany eropeanina tany Amerika, no nokendrena ho mariky ny imperialisme.
Ny sasany amin'ireo mpitondra fanjakana sy eo an-toerana dia samy nanao dingana hanaisotra ireo marika Confederate.
Tany am-piandohan'ity volana ity, ny governora any Virginia Ralph Northam dia nanambara fa ny sarivongan'i Confederate Jeneraly Robert E Lee dia esorina amin'ny renivohitry ny fanjakana any Richmond.
Ity lahatsoratra ity dia niseho voalohany tamin'ny: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53201784
Tsaho maty Kim Jong-Un: fanambarana manaitra ny Minisitry ny Fiarovana Japoney
Kamerona, krizy miteny anglisy: "ny vondrona iraisampirenena ihany no afaka manery ny antoko rehetra ho tonga eo amin'ny latabatra hanaovana fifanakalozan-kevitra"